Liverpool v Liverpool Manchester City - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 10 Noofambar 2019 - ESPN - Waxay TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Liverpool vs. Manchester City - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 10 Noofambar 2019 - ESPN
Liverpool v Liverpool Manchester City - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 10 Noofambar 2019 - ESPN
Liverpool ayaa ku furatay hoggaanka sideed dhibcood hogaanka horyaalka Premier League ka dib guul cajiib ah oo cajiib ah oo ay ka gaartay 3 oo ay ku garaacday 1 kooxda difaacaneysa horyaalka ee Manchester City kulankii ka dhacay Anfield axadii.
Guushaani waxay ka dhigeysaa Liverpool inaan laga badinin dhibcaha 34. Kulamada 12, sideed ka horreeya Leicester City iyo Chelsea, iyo sagaal ka horreeya afaraad, City, Pep Guardiola.
Liverpool ayaa hogaanka qabaneysa daqiiqadii lixaad iyadoo ku mahadineysa darbo xoogan oo ka timid daafaca reer Brazil Fabinho yaa qabta yoolka. oggolaanshaha Ilkay Gundogan iyo soo dhaafay oo ka yimid Claudio Bravo fog. Ka hor nasashada ee ku hogaamineysa goolka Daafaca Liverpool Trent Alexander-Arnold waxay u muuqdeen inay kubad ku maamulayaan dusha sare, laakiin dhaleeceynta VAR ayaa ka dhanka aheyd booqdayaasha.
Magaalada ayaa horay ushaqeysa iyo Raheem Sterling madax meel fog saar, laakiin Liverpool ayaa mar kale ku dhufanaysa daqiiqaddii 13e marka Andy Robertson xarunta bidix iyo Mohamed Salah sanka hore ee Bravo si uu ugu dhaliyo 2-0.
Guuldaradii seddexaad ee xilli ciyaareedku waxay umuuqataa mid la hubo markii Liverpool ay dhalisay 3-0 lix daqiiqo ka dib dhexda; Jordan Henderson wuxuu u shaqeynayay xarun ku taal darbiga midig iyo Sadio Mane
Bernardo Silva gool u dhaliyay City daqiiqaddii 78, oo qoday xarun hooseysa Angelino booqdayaashu way ka faa’iidaysteen
“Waxa dhacay maanta, waxaan soo bandhignay sababta aan u nahay horyaalnimada, aad ayaan ugu faraxsanahay kooxdeyda, in ka badan sidii hore,” ayuu yiri tababaraha magaalada Guardiola. Waxaan ku faani karnaa qaabkii aan uga soo horjeednay kooxdii ugu adkeyd Yurub.
Isaga oo kaashanaya muranka ka dhashay goolka koowaad, wuxuu raaciyay: “Weydii garsoorayaasha, ha i weydiinin. Weydii Mike Riley iyo wiilasha VAR. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo wax qabadkeena, way fiicneyd.
Waxay ahayd mid ka mid ah qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa ee aan ciyaarnay. Waxaan u ciyaarnay sidii horyaal isku xiga. Ma dafiri karno tayada Liverpool, laakiin ciyaaray, shaqsiyad ahaan, way fiicneyd. Waxay ahayd wax la mid ah ciyaarta Champions League. Waxay ahayd xaalad aan caadi ahayn kulankaan sidoo kale, laakiin qaab ciyaareedku maanta aad ayuu u fiicnaa.
“Had iyo jeer waan isku daynaa, waligeen kama quusanayno, waana sababtaas tan aan dib ugu noqonay horyaalnimada. Dagaaladu had iyo jeer ilaa dhamaadka. Waa muhim in loo koboco koox ahaan iyo koox ahaan. Sharaf ayey ii aheyd labada koox inay soo bandhigaan ciyaar noocan oo kale ah Premier League. ”
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/report?gameId=541731
Dib-u-soo-nooleynta xujayda ayaa sii socota halka Saint-Etienne ay garaacday Nantes booska 3
Kadib KSI ka dhanka ah Logan Paul 2, waa kuwee ciyaartoyda kubada cagta ee kula dagaallamaya giraanta?